Dawlada Hoose ee Qardho oo bilawday Qorshayaal lagu furayo wadooyinka Xaafadaha. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Dawlada Hoose ee Qardho oo bilawday Qorshayaal lagu furayo wadooyinka Xaafadaha.
Dawlada Hoose ee Qardho oo bilawday Qorshayaal lagu furayo wadooyinka Xaafadaha.
July 10, 2018 - By: Mohamud Nadif
Olalahaan ay bilawday dawlada Hoose ee degmada Qardho ayaa ah mid lagu furayo wadooyinka dhex mara xaafadaha magaalada oo qaarkood dad shacab ah ay xirteen sidoo kalena lagu hagaajinayo qaab dhismeedka magaalada , in ka badan toban wado ayay maanta dawlada hoose ka furtay xaafada Qoryacad oo ahayd xaafadii koowaad ee laga fuliyo hawlgaladaan , dadka shacabka ee degan xaafadaas oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in ay horay u haystay dhibaatoyin la xiriira wadooyinkii oo la xirtay ayna waayeen meel ay booyadaha biyuhu u soo maraan qofka xanuunsatana laga saaro, waxay maamulka dawlada hoose ku boogaadiyeen shaqada ay hayaan .
Eng yuusuf Ismaaciil Cabdi Agaasimaha hawlaha guud ee dawlada hoose waxa uu tilmamey in qorhahaan uu ahaa mid mudo ay diyaariyeen , sidoo kalena waxa uu shacabka faray in ay cashuurtaan dhulka bogcadaha ah ee banaan.
Xildhiibaan Yaasiin Cabdi iyo Axmed Nadiif oo ka tirsan golaha deegaanka degmada qardho waxa tilmaameen in qorshahaan uu socon doon dhamaan xafadaha magaaladana laga fulim doonaa hawlgaladaan shacabkana waxay ka codsadeen in lala shaqeeyo dawlada hoose.